सिस्नोको सेवनले मुटु र मृगौला सम्मको रोगहरुलाई फाइदाजनक…हेर्नुहोस् ।(प्रयोग गर्ने बिधि सहित) – yuwa Awaj
काठमाडौं : सिस्नो स्वादका लागि मात्र नभई स्वास्थका लागि पनि उतिकै फाइदा जनक मानिन्छ । सिस्नो प्रायः सबै ठाउँमा पाइन्छ यसमा धेरै किसिमको प्रोटि हरु पाइन्छ् सिस्नोमा फलाम आइरन , पोटासियम, क्याल्सियम, भिटामिन ए, सी र डी जस्ता पौष्टिक तत्व प्रचुर मात्रामा पाइन्छ ।
यसमा रहेको औषधि गुण र प्रभावकारीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्र, होटल र रेष्टुरेन्टमा समेत यसको प्रयोग बढ्दो छ तर यद्यपि, चेतनाको अभावका कारण गाउँघरमा अधिकांशले सिस्नो खाँदैनन् । सिस्नोको धुलोलाई दाल र सुप बनाएरसमेत खान सकिन्छ । हरियो सिस्नोको मुन्टा टिपेर तरकारीको रूपमा समेत प्रयोग हुने गरेको छ ।
औषधीय गुण९सिस्नोमा पाइने फलामले महिलामा रक्तअल्पता र कमजोरी हुनबाट जोगाउँछ । सिस्नोले धेरै किसिमको रोगको उपचार गरेको हुन्छ । विशेष गरेर मुटु तथा मधुमेहसम्बन्धी रोगका लागि यो निकै नै लाभदायिक मानिन्छ । किड्नीको समस्या हुनबाट जोगाउन सघाउँछ । यसले शरीरमा एलर्जी हुनेहरूका लागि धेरै राम्रो काम गरेको हुन्छ ।
पिसाब संक्रमण हुनेहरूका लागि पनि सिस्नु खानाले धेरै फाइदा गर्छ कपाल सिल्की बनाउनुका साथै झर्नबाट रोकिन्छ । नयाँ रगत बन्नका लागि पनि सिस्नुले धेरै भूमिका खेलेको हुन्छ । सिस्नोको लेदोलाई मेहन्दी बनाएर कपालमा लगाउँदा कपाल झर्ने समस्या कम हुन्छ ।
त्यस्तै भाँचिएको तथा मर्केमा, हाड जोड्न, हाड–जोर्नी दुखेकोमा पनि सिस्नो उपयोगी मानिन्छ ।यसमा करिब २५ प्रतिशत प्रोटिन हुन्छ । यसमा आइरनसमेत पाइन्छ । सिस्नोमा फाइबरसमेत हुन्छ, जसले खाना पचाउन सहयोग गर्छ ।
कम्जोर महसुस हुने,पेट दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएको छ भने तुरुन्तै पढ्नुहोस,यस्तो गम्भि,र समस्या आउंदै छ ।
काठमाडौँ : जीवनशैली र स्वास्थ्यमा ध्यान नदिँदा कैयौं किसिमका समस्या आउँछन् । यिनै मध्येको एक रोग एड्सभन्दा पनि खतरनाक छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार विश्व स्तरमा एड्सभन्दा पनि धेरै मृत्यु हेपाटाइटिस बीका कारण भएका छन् । यो यस्तो रोग हो जो शरीरमा एचबीभी भाइरस फैलिएका कारण हुन्छ ।यो भाइरस संक्रमित रगत वा संक्रमित व्यक्तिसँग शारीरिक सम्बन्धका कारण सर्छ । यसको कारण कलेजोमा संक्रमण फैलिन्छ साथै कलेजोले काम नगर्ने र क्यान्सरको स्थिति आउँछ ।
हेपाटाइटिस बी का लक्षणहरु:१. छाला र आँखाको रंग पहेंलो हुनु ।२. पिसाबको रंग खैरो वा सुन्तला रंगको हुनु ।३. लामो समयसम्म बिरामी हुनु ।४. लगातार महिनौंसम्म थकान र कमजोरी हुनु ।५. बेचैनी हुनु र पटक टिक बान्ता हुनु ।६. पेट दुख्नु र सुन्निनु ।
यो पनि:कोलेस्टेरोल फ्याटसँग सम्बन्धित समस्या हो । कोलेस्टोर हाम्रो शरिरमा आफैँ पनि बन्छ साथै खानाबाट पनी प्राप्त हुन्छ । यदि हाम्रो शरीरमा प्रोटिनको परिणाम २०० एमजी परडिएल भन्दा बढि भयो भने त्यसलाई उच्च कोलेस्टेरोलको संज्ञा दिइन्छ । बढ्दो उमेरसँगै कोलेस्टेरोल पनि बढ्दै जान्छ ।राम्रो किसीमको कोलेस्टोलले विभीन्न रोगलाग्न बाट वा कम नियन्त्रण गर्न मद्धत गर्छ । जस्तैः मुटुरोग, युरीक एसिड, मधुमेह हुन नदिने अथवा कम गराउने गर्दछ । नराम्रो कोलेस्टेरोलले विभीन्न रोगहरु निम्त्याउने र बढाउने गर्छ । जस्तैः युरीक एसिड बढाउने मुटुरोग बढाउने गर्दछ ।
कोलेस्टेरोलमा चिल्लो पर्दाथले महत्वपुर्ण भुमिका खेलेको हुन्छ ।त्यसैले हामीले खानेकुराहरु खाँदा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । कोलेस्टोल भएको व्यक्तिले यस्ता खानेकुरा खानुपर्छ ।विभिन्न फलफुलमा हुने एन्टिअक्सीडेन्ट सस्टेन्टले पनि कोलेस्टेरोलको मात्रा कम गर्न मद्धत गर्छ ।
कोलेस्टोरको समस्या भएका व्यक्तिले मनोअनस्याचुरेट फ्याटि एसिडलाई प्राथामिकतामा राख्नुपर्ने हुन्छ । प्रशस्त सागपात र फलफुललाई खानामा समाबेश गर्दा कोलेस्टेरोल घटाउन सकिन्छ ।कोलेस्टेरोलको समस्या भएको व्यक्तिलाई अण्डा खान दिन हुदैँन । तर कतिपय रिर्सचले अण्डा खान मिल्ले जनाएको छ ।
Prevबेला-बेलामा टाउको फुट्ने गरी दुख्छ भने यस्ता कुरा अपनाउनुहोस ।(बिधि सहित)
Nextकुलमानको ठाउँमा हितेन्द्र देव शाक्य…हेर्नुहोस् ।